Ukuhlaziywa kwe "Walser" Chalet kwindalo kufutshane neAlagna
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguRonny
I-chalet yethu yindawo ehlaziyiweyo ye "Walser". Siyintsapho yaseBelgian enabantwana aba-3 kunye nenja kwaye siyayithanda le ndawo ikude ethe cwaka kwintlambo yaseValsesia enelanga. Siyakunandipha ukuhamba ezintabeni okanye ukuhamba nje entlanjeni okanye ukuqubha kumlambo odlula ngasemva kwendlu yethu. Siyakuthanda ukutyibiliza kwindawo ekufuphi ye "Monte Rosa" Ski (imizuzu eli-15 uqhuba unyusa umsinga) kwaye ukonwabele ukupheka ngemveliso yasekhaya emnandi kakhulu yewayini (Gattinara, Ghemme, Barbaresco, Barolo, ...).
Indlu yethu enomtsalane yahlulwe yangamacandelo amabini ahlukeneyo, inxalenye nganye yeyosapho olwahlukileyo. Omabini la macandelo ohlulwe ngokupheleleyo aneendawo zokungena ezingafaniyo kwaye arentwa ngokwahlukeneyo ngo-Airbnb. Inxalenye yethu ibandakanya imigangatho ephakathi kunye nephezulu, i-balcony enelanga kunye negadi ephezulu kunye nesezantsi (ekhohlo kocingo), ngelixa ummelwane wethu wase-Italiya onobubele "uSergio" erenta umgangatho ophantsi kunye negadi esezantsi (icala lasekunene locingo). Umnyango wendlu yethu ukwicala elingasemva lendlu onokuthi ufike kuyo ngokuhamba ukusuka egaraji unyusa indlela yokuqhuba ecaleni kwamatye.
Kukho igumbi lokulala elikhulu kumgangatho ophezulu kunye nebhedi enkulu ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite kunye neWC. Kumgangatho osezantsi, kukho igumbi lokulala elineebhedi ezimbini zomntu ngamnye kunye ne-mezzanine enebhedi ezimbini. Kubantwana abancinci, kukho ibhedi yomntwana esongelayo ekhabhathini kwigumbi lokulala elikhulu elikumgangatho ophezulu. Kukwakho negumbi lokuhlambela elahlukileyo eline-WC kumgangatho osezantsi.
Iimoto zinokupakishwa kwindlela enkulu yokuqhuba. Kwigadi esezantsi (kwinqanaba lesitrato), kukho indawo yomlilo yangaphandle apho unokuyonwabela iinkwenkwezi ezintle ebusuku. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngaphandle kwe microwave. Kukho umabonwakude omkhulu, nangona kunjalo ongenawo amatshaneli eTV (akukho nxibelelwano losasazo lweTV), kodwa eqhagamshelwe kwiWifi ngeChromecast ukuze ukwazi ukusasaza uthotho lwakho oluthandayo kunye neemuvi kwinkonzo oyithandayo yokusasaza (umzekelo, iNetflix , Ijelo leDisney, ...).
Siyayithanda le ntlambo ngenxa yentaba enkulu kunye nembonakalo yomlambo wasendle. Abantu bezemidlalo banokuhamba nge-skiing, i-snowboarding, i-kayaking, i-rafting, i-hiking okanye i-mountain biking. Ungakonwabela ukutya okumnandi kunye newayini entle kwiindawo zokutyela ezincinci kwiilali ezipholileyo; nokuba kusentlanjeni, nokuba kusencotsheni yeentaba. Ukhetho luyamangalisa ngenene ukusukela kukutya okucekeceke okucokisekileyo (umzekelo, kwi "Hostaria di Bricai" kwilali ethandekayo yeentaba "Rassa" okanye "iGiardini" kumbindi wePiode) ukuya kukutya okulula kweTaliyane kunye neepasta zokwenyani kunye neepizza. Indawo yethu yokutyela yosapho esiyintandokazi yasekhaya yi "Lo Chalet" emantla "eRiva Valdobbia".
Iidolophana zethu ezizithandayo ezikufutshane "Walser" ngokuqinisekileyo "iRassa" (i-3 kms kwintlambo esecaleni), "i-Riva Valdobbia" (i-12 kms phezulu) kunye ne "Rusa" (iikhilomitha ezi-5 phezulu).
Ukuskiya, unokhetho phakathi kweresort enkulu yaseMonte Rosa (kuya kufuneka uthathe i-ski lift e-Alagna eyi-15 kms ukuya phezulu ngemoto) okanye indawo encinci ekufutshane ye "Alpe di Mera" (kuya kufuneka uthabathe ilifti. kwilali elandelayo esezantsi komlambo "iPila" ekwiikhilomitha ezi-3 ezantsi ngemoto).
Ichibi esilithandayo elikufutshane "Lago d'Orta" kwaye siyayithanda idolophu encinci enomtsalane "i-Orta San Giulio" echibini (iikhilomitha ezingama-60 ngemoto).
Zombini iMilan (i-130 kms) kunye neTurin (i-135 kms) zifikeleleka kwiihambo zedolophu ngemoto. Isikhululo seenqwelomoya esikhulu yiMilan Malpensa (i-95 kms).
Umbuki zindwendwe ngu- Ronny
Belgian living in Antwerp Belgium
Njengoko sihlala eBelgium, i-chalet yethu iqeshwa ngumhlobo wasekuhlaleni wase-Italiya uSilvia onguMphathi onamava ohlala kufutshane nasentlanjeni.
Iilwimi: Nederlands, English, Français, Deutsch, 日本語